E guzobere SPL na 2001 ma bụrụ ụlọ ọrụ nke Lianhe Chemical Technology Co., Ltd. (Kee koodu 002250). SPL emi odude ke Baoshan obodo ụlọ ọrụ park na Shanghai, na nnọọ mma Njikọta na iga usoro adaba okporo ụzọ, nso agbata obi na ná mgbanaka ụzọ nke shanghai, na 13km n'ebe Hongqiao mba ọdụ ụgbọ elu, na 12km n'ebe Shanghai Railway Station. E wuru ụlọ ọrụ SPL na mpaghara 27,000m2, nke gụnyere mpaghara ụlọ isi nke 18,000m2. Companylọ ọrụ ahụ bụ ISO 9001: 2015 kwadoro ma na-agbasosi ụkpụrụ nduzi ike n'okpuru usoro njikwa Ogo a.
N'ịgbalị imezu ihe ị chọrọ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.